I-Semalt Incoma Ukusebenzisa Idatha Ehlelwe Ngekhwalithi Ukuthola Ukuchofoza Okuningi
NgoSepthemba wango-2019, i-Google yakhipha isici enjini yayo yokusesha enolwazi ngamasethi wedatha. Kusinikeza izinto ezimbili: insiza ebonakalayo yedatha ebalulekile kulabo abafuna ukuqinisa isimangalo sabo kanye nelinye iqhinga lokusebenzisa injini yokusesha. Noma ngabe ilitshe lakho lingaba yini, sinesixazululo.
Iyini Idatha Ehlelekile?
Idatha ehlelekile yifomethi ekhethwe yi-Google lapho ifuna ama-datha. Isitayela senhlangano yedathasethi siku-schema.org , lapho ungahamba khona ngohlu lwe-schemas ukuthola isitayela sedatha ukulingana nesigaba sakho. Uma lokhu kubonakala kungaphezu kwamandla, sizongena eminye imininingwane ngokuhamba kwesikhathi. Okokuqala, ngezansi uhlu lwamagama esizosebenzisa.
I-Schema - Isigaba sezakhiwo eziguqukayo ngokuya ngesihloko okuxoxwe ngaso.
Lokhu kufaka phakathi i-vents, imisebenzi yokudala, imikhiqizo kanye nezindawo.
I-Dataset - Imininingwane ehambisana ne-schema.
Imisebenzi yokudala izoba nomlobi, umhleli, kanye ne-abstract.
I-Microdata - Nawa amathegi asetshenziswe ku-HTML ukuchaza uhlobo ledatha.
"Umbhali" ngokwakhe yithegi engaba khona
Ukumaka - Uma ufaka i-microdata kudathasethi yakho
ITEMSCOPE - Ithegi ye-HTML yokusebenzisa i-schema
I-ITEMTYPE - Ithegi ye-HTML yokuchaza uhlobo lwe-schema
I-ITEMPROP - Ithegi ye-HTML yokuchaza impahla yento.
Itemprop = "umbhali"
Uma ungazi lutho nge-HTML, qonda ukuthi izincazelo ezintathu zokugcina zingaphakathi kwekhodi. Uzozibona kaningi lapho ucubungula imininingwane yedatha nama-schemas. Awudingi ukuqonda i-HTML ukuze uqonde lokhu okuthunyelwe.
Uma uqonda i-HTML, uzobona lokhu njengesisekelo sokusebenzisa i-schema kukhodi yakho. I-Schemas izokuvumela ukuthi uhlelele okuqukethwe kwakho ukuthi kubonwe ngezinjini zokusesha zeGoogle njengedathabhethi. Lolu hlelo lokusebenza lwe-schema luzoletha ithrafikhi kuwebhusayithi yakho uma iphathwe kahle.
Ngiyisebenzisa kanjani le datha kuwebhusayithi yami?
Sizobuyela ekusebenziseni okuqukethwe kwakho njengedathabheki kamuva kubhulogi. Okokuqala, siza ukusebenzisa le injini yokusesha njengomthombo ongawusebenzisa kuwebhusayithi yakho. Kulula kakhulu ukuphindisela idatha esele ikhona kunokudala idatha eyingqayizivele.
Kunini Lapho Kufanele Ngikhathazeke Ngokuphathelene ne-copyright?
Uma ukhumbula izinsuku zakho zasekolishi, ukubala imithombo yakho kwakuyisihluthulelo sokusebenzisa idatha ukuthuthukisa amaphuzu akho. Uma kukhulunywa ngokukhiqizwa kokuqukethwe, iningi lemithetho efanayo lizosebenza inqobo nje uma ubanikeza isikweletu. Isibonelo, angikwazanga ukukutshela ukuthi ngabhala indaba yasekuqaleni evamile ukusolwa ngefoto lendaba IT nguSteven King.
Ukusesha kwe-Google Dataset kufaka phakathi isici sokucinga esilinganiselayo ngokusetshenziswa okuthengiswayo nokungeyona okuthengiswayo. Uma inhloso yakho ukubhala ibhulogi ehlotshaniswa nomkhiqizo ukwenza ukuthengisa, lesi sigaba sizodingeka kuwe. Uma ungaqinisekile, zizwe ukhululekile ukufinyelela kublogger noma inkampani ehlobene. Bazokwazisa ukungena kwakho, futhi kungakuvulela elinye ithuba.
Yini Okufanele Ngiyicinge kuGoogle Dataset?
Okufanele ukuseshe kuzoncika ku-niche yakho. Masithi uzama ukwenza iphuzu kuma-CEO ezingenzi-nzuzo. Ungafunga ukuthi bakhokhelwa kakhulu. Ngakho-ke usesha umsebenzi wokupha ngesibonelelo esincane. Kepha ukusebenzisa “ukubukwa kwesihloko” kukusiza unciphise isikhathi. Imininingwane isesithombeni esingezansi.
Ake sithi ufuna itafula elinohlu lwezibonelelo ezinikela ezisebenza e-UK. Ungahle uhlele imininingwane ngefomethi. Kulokhu, ukhetha inketho yefomethi bese ukhetha "itafula." Kulokhu, qaphela ikakhulukazi ukusetshenziswa lapho lokhu kusebenza khona.
Ingabe Zikhona Izinsizakusebenza Lapho usebenzisa iGoogle Dataset Search?
Abantu abagxila kubhulogi le-Google bazothola ukufinyelela ngokushesha kolwazi. Ungalandela futhi ibhulogi likaSemalt, ozobe ebheke kakhulu ekutheni lokhu kuguqula kanjani ukubonwa kwe-SEO. I-Google nayo ine- FAQ .
Ngenkathi i-Google yethule into ethokozisayo ekusetshenzisweni kwenjini yayo yokusesha, inhloso kaSemalt kukusala ekukuyisa phezulu kwalesi simo. Esigabeni esilandelayo, sizodlula ukuthi ungawasebenzisa kanjani amadatha akho kule njini yokusesha. Ukusebenzisa le datha ehlelekile kuyithuba elisha kulabo abafuna ukwandisa ukubonakala kwabo futhi bathole ukuchofoza okuningi.
Ungawabheka Kanjani amakhasi akho e-Dataset
Ukwenza izinto zibe lula, sizonikezela ngenqubo yezinyathelo ngezinyathelo ukukusiza ngokumaka amakhasi wakho wedatha. Sizophinde sikunikeze izinsiza ezimbalwa ezizokusiza lapho usendleleni. Ngezansi kunohlu oluchaza ukuthi sizokwedlula ini.
Chaza isihloko sakho (i-schema).
Qaphela ukuthi yini efanelekile njengedathasethi.
Cwaninga idatha efanelekile futhi eyingqayizivele.
Khiqiza i-HTML edingekayo.
Ukuchaza Isihloko Sakho
Ukuchazwa kwe-schema yakho kuyisinyathelo sokuqala ekukhiqizeni noma iyiphi isethi yedatha. Uhlu lwe-Schemas luku-schema.org. Kungaba nekhasi elilodwa kuphela ku-schema ngayinye. Ngakho-ke awungeke usebenzise ikhasi langaphambili ku-schema, uzobandakanya kuphela iposi le-blog.
Kulokhu, sizobe sisebenzisa isitolo sendawo. Lapho wenza ucwaningo kuwebhusayithi, unqume ukuthi ungathanda ukukleliswa njengendawo kudathasethi yakho. Ukwenza isibonelo, ake sithi uqasha umuntu ukuthi aqoqe imininingwane ngezindleko zenyama yenkomo edolobheni lakho. Ngokwenza ucwaningo, uzokwazi ukusebenzisa leli datha kubantu abafuna lokhu endaweni yakho.
Kungisiza Kanjani Lokhu?
Lo mzamo uzokhulisa ithrafikhi yewebhu futhi unikeze iwebhusayithi yakho ukuthi ikhuthaze njengomthombo wolwazi othembekile. Ungasebenzisa futhi lolu lwazi ezikhangisweni ezizayo. Ungasho ukuthi une-beletevis yenyama ebiza kakhulu uma uyiqhathanisa namabhulokhi alandelayo ayikhulu edolobheni lakho. Qiniseka ukuthi uhlonipha abanye ngenqubo yokusebenzisa lolu lwazi.
Qaphela Lokho Okufanelekelayo NjengeDataset
Indlela enhle umuntu angathola ngayo mayelana nokufanele njenge-datha yosesho. I-FAQ yokuthuthukisa i-Google nayo inezibonelo ezimbalwa , kepha sizofuna ukwanda ohlwini. Isibonelo esisodwa engifuna ukugxila kuso "noma yini ebukeka njengedathasethi." Ithuluzi lokusesha lakwaGoogle linamandla amakhulu inqobo nje uma ukwazi ukuphatha imininingwane.
Ngokuthatha isibonelo sethu sangaphambilini, singakwazi ukuhlunga amadokhumenti "amahle kakhulu enyama edolobheni" esikhiqize futhi siwasebenzise etafuleni elihle kakhulu, etafuleni lewebhusayithi eyakhelwe ngaphakathi, i-.pdf, i-.xml, i-.docx kanye ne abanye abambalwa abangafundwa yi-google's AI. Ungasebenzisa futhi isithombe esifanele. Amagrafu we-bar namagrafu womugqa aphathwa kalula yi-Excel.
Amadokhumenti azokwazisa imininingwane etholakala ngokuhlanzeka nangobungcweti. Uma iwebhusayithi yakho yenziwe kahle ukukhiqiza lolu hlobo lwethebula nedatha, iGoogle izosebenzisa lolo lwazi ukuthuthukisa uphenyo. Futhi, izivakashi zingaba nezitayela ezahlukahlukene zokufunda. Ukukhiqiza okuqukethwe kwamahhala ngezindlela ezahlukahlukene zemidiya kuzosiza umfundi ukuthi aqonde iphuzu lakho.
Ukucwaninga Imininingwane Eyingqayizivele Nefanele
Isihluthulelo se-SEO nedatha yolwazi zikhiqiza okuqukethwe okuhlukile okuhlanganisa amagama angukhiye ku-niche ethile. Okufanayo kuyasebenza maqondana nama-schemas nedatha. Ngokwenza okuthile ngesakhiwo esijwayelekile, kwenza izinto zibe lula kubafundi ukuzisebenzisa. Idatha ehlukile yiyona ezobagcina bezungezile.
Esitolo esithengisa izinkabi, angahle afonele azungeze noma aye kumawebhusayithi ambalwa ukunikela ngemininingwane. Imininingwane idinga ukulinganiswa futhi itholwe. Kulokhu, kulula njengokubheka nokushaya njengoba kudingeka. Uma ufuna umbono wabantu ngebhizinisi lakho, babanikeze isikali sisuka kwelilodwa liye kwesihlanu. Ungaphinde usebenzise izibuyekezo zomphakathi ku-Google, kepha idatha ayilula ukuqoqa.
Lolu lwazi lusiza ukugcwalisa idathasethi yakho. Kodwa-ke, ukusetshenziswa okuhlukile kufaka ukuthuthukiswa kwebhizinisi nokuqwashisa ngezinkinga. Uma wenza ukubukeza, ukuthola ukuthi awunayo indawo, yithuba lokuthuthuka. Ungadinga ushintshe isihloko sakho uma ufisa ukugcwalisa idathabhethi.
Khiqiza i-HTML Iyadingeka
Ukukhiqiza i-HTML inqubo ebandakanyekayo kwezobuchwepheshe engathatha isikhathi esiningi. Izinhlamvu esishilo ngenhla kungenzeka zidideke uma awunolwazi nge-HTML noma ngolimi lohlelo. Ungafisa ukuqasha ithalente elisha ukukusiza.
Amathalente anjengalawa kumawebhusayithi ajikelezayo. Izibonelo ezidumile zalokhu zingafaka iToptal, Upwork, ne- Freelancer.com. Zama ukuthola umuntu oye waba nesipiliyoni emkhakheni ngaphambili. Uma bengazange babhale umaki kudathasethi ngaphambili, kungenzeka bangazi ukuthi benzani. Uma bayazi ukuthi benzani, babuyekeza i -ITEMPROP yakho eqondisiwe ukuze ubukeze i-HTML ngolwazi oluthile.
Ama-freelancers amaningi futhi azoletha umbono omusha kwinkampani yakho. Qiniseka ukubambelela kumbono wenkampani yakho. Ngaphezu kwalokho, ama-freelancers angahle adide ne-SEO yakho. Qiniseka ukuthi uthintana noSemalt uma unemibuzo mayelana nokuthi yini esikisela ngayo ngokusebenzisa i-database kuwebhusayithi yakho.
Ingabe Ukubaluleka Kwe-Dataset Kubeka ekhasini lami?
Impendulo yalo mbuzo incike kunhloso yakho jikelele. Ukwakha iwebhusayithi, noma ibhulogi, kususelwa ezingxenyeni zokwaziswa nezindatshana eziqukethe imininingo ehlukile yemininingwane kuthatha umsebenzi omkhulu. Amabhizinisi amancane angagcina ngokutshala imali enkulu ngaphezu kwezinhlelo zawo. Izinga lesikhathi, umzamo, kanye nemali lokhu kungathatha amandla kungaphezu kwamandla.
Kodwa-ke, ukudala isisekelo semininingwane ezungeze ibhizinisi lakho elixhumene njalo newebhusayithi yakho kubalulekile kucebo eliqinile le-blog. Ukufaka lolu lwazi njengedatha kukhulisa ukuthembeka kwakho. Ukusesha kweDatabase lakwaGoogle bekukhulisa izinga lokuchofoza kwamaqembu ocwaningo amaningi ngenxa yalokhu. Ukubeka okuqukethwe kwakho eceleni kwalokhu kukunika amandla okusheshayo.
Ucwaningo Case Injini Ye-Dataset yakwaGoogle
Kungenzeka ukuthi ucabanga ukuthi lokhu kwakheke okungcono emaqenjini ezemfundo namawebhusayithi asuselwa kwizibalo. Kodwa-ke, inkampani yaseJapan egama linguRakuten isebenzise le nsizakalo ukukhuthaza iRakuten Recipies. Ukusetshenziswa kwedatha ehlelekile kukhuphule ukuhanjiswa kwewebhu yabo ngamaphesenti angama-270.
Leli su alihlali liholele emuva ekutholeni ngokwakho enjini yokucinga yedatha. Kwesinye isikhathi kukuholela ekutheni ube phakathi kwezingcibisholo ezifakiwe. Izithonjana ezifakiwe ziyinto ethile esizoxoxa ngayo ngokuningana kwenye ibhulogi.
Idatha Ehlelekile izongisiza Kanjani Ngifinyelele ku-Google Top?
Ezinkampanini eziningi, idatha ehlelekile iyindlela yokuthuthukisa i-SEO yakho ngokusebenzisa imininingo egciniwe ekhona nefomathi. Kwabanye abangaphenya imininingwane enkulu yemininingwane, yithuba. Ngokwenza ucwaningo futhi wazi ukuthi iwebhusayithi yakho ingena kanjani kule webhu, uzinika ithuba elihle kakhulu. Ngokuxoxisana noSemalt, sizobona ukuthi iwebhusayithi yakho izokwazi yini ukusebenzisa lokhu ukuthola phezulu kweGoogle.